Fitsidihana ara-pomba fifanajan'ny delegasiona avy any Afrika Atsimo tao amin'ny Praiminisitra | Primature
Fitsidihana ara-pomba fifanajan’ny delegasiona avy any Afrika Atsimo tao amin’ny Praiminisitra
Lapan’i Mahazoarivo, ny 15 mey 2018 – Tonga nitsidika ara-pomba fifanajana ny Praiminisitra, Lehiben’ny Governemanta, Mahafaly Solonandrasana Olivier ny delegasiona avy atsy Afrika Atsimo izay notarihin’ny Ambasadaorony monina sy miasa eto amintsika, Ramatoa Maud Vuyelwa Dloma.
Nifantoka tamin’ny fanamafisana orina hatrany ny fiaraha-miasa sy ny fandinihana ary ny fijerena ny zava-misy eto an-toerana momba ny resaka fifidianana, ny fihaonana.
Nandritra izany no nilazan-dRamatoa Maud Vuyelwa Dloma fa vonona hanampy ny firenena Malagasy izy ireo amin’ny dingana fanomanana ny fifidianana, sy eo amin’ny lafiny fampandrosoana.
Mikasika ny fanomanana ny fifidianana, dia misy ireo teknisiana manana traikefa manokana amin’ny fikarakarana izany, izay mandalo eto an-toerana mandritra ny herinandro, ka hihaona amin’ny tomponandraikitra ao amin’ny CENI, ao amin’ny minisiteran’ny Fitatanam-bola ary ao amin’ny Banky Foibe.
Voasoritra ao anaty fikasàna amin’ny fiaraha-miasa ny fanampiana amin’ny lafiny ara-pitaovana ankapobeny, raha tsy hilaza afa-tsy ny angidimby hitaterana ny vokatra, satria midadasika i Madagasikara. Ary mahafaly ny Afrikanina Tatsimo koa ny fahitany fa mizotra mankany amin’ny fikatsahana filaminana mba hafahana manatanteraka fifidianana demokratika ny Firenena Malagasy.
Nanolotra fisaorana ho an-dRamatoa Ambasadaoro sy ireo delegasiona niaraka taminy ny Praiminisitra tamin’ny fanohanan’izy ireo ny antso izay nataon’ny Governemanta amin’ny fikarakarana ny fifidianana. Navoitran’ny lehiben’ny Governemanta ihany koa ny hatsarana sy fahamatoran’ny fiaraha-miasa efa misy. Mikasika ny fanomanana ny fifidianana indray, dia nambarany efa lany sy navoaka ny lalàna ary mbola hisy ihany koa ny lalàna izay hoentina eo anivon’ny Filankevitry ny Governemanta ho fanamafisana orina ny fahaleovanten’ny vaomiera manokana misahana ny fifidianana; ary ny lalàna mifehy ny antoko politika eto Madagasikara. Mikasika ny toe-draharaha ankehitriny sy ny famahana ny olana kosa, ny tanjona etoana dia mba samy ho tonga saina ny tsirairay hamaha haingana ny olana ahafahana miroso amin’ny fifidianana.
Marihina moa fa misokajy telo samihafa ireo delegasionina tonga teto Mahazoarivo : ny AEC, na ny vaomiera mahaleo tena misahana ny fifidianana any Afrika Atsimo (toy ny CENI eto Madagasikara); ny solon-tena avy amin’ny fikambanan’ny mpandraharaha, tonga hijery izay sehatra azo iaraha-miasa, taorian’ilay fivorian’ny mpampiasa vola natao tany Afrika farany teo; ary ny delegasionina avy eo anivon’ny Minisiteran’ ny Raraham-bahiny Afrikana Tatsimo, mandinika izay fomba manamafy ny fifandraisana sy ny fiaraha-miasa ankapobeny eo amin’ny Firenena roa tonta.
← Fanaovan-tsonia famatsiam-bola vaovao avy amin’ny Masoivoho iraisam-pirenena koreanina (KOICA) ho an’ny tetikasa fiaraha-miasa eo amin’ny UNICEF sy ny Governemanta Malagasy